Izinhlobo izikole kwezimilo
Siyini isimo sengqondo kwabanye abantu maqondana nezingane ezikhubazekile? Iningi labantu abadala sibaphathe njengendlela "duck abampofu, nezinyonga" nomphakathi yezingane uyawalahla njengabantu "esibucayi kangaka." Kakhulu akuvamile ingane ekhetheke ihlangabezana isithakazelo kwabanye abantu, yisifiso sokwenza abangane.
Okubi nakakhulu nebhizinisi ukuqeqeshwa. Akuwona wonke esikoleni uzilungiselele ukufundisa ingane abanezidingo ezikhethekile zemfundo. Nakuba ukufakwa - imfundo kahle izingane ezikhubazeke ngokomzimba kwabantu bemikhakha ehlukene secondary school - abagcina abazali enezingane ezinezidingo ezikhethekile.
Isiphetho eziningi lezi zingane - ukuqeqesha ezikoleni kwezimilo, okuyinto engelula eduze nendlu, futhi ngokuvamile edolobheni ezahlukene. Ngakho-ke, iningi labo kufanele baphile esikhathini boarding school.
Okwamanje, izinhlobo ezikoleni kwezimilo zinqunywa esekelwe eyinhloko abafundi isici. Ngamunye izinhlobo eziyisishiyagalombili kwezikhungo zokufundisa izingane zabo ezinezidingo ezikhethekile zemfundo has imininingwane yayo siqu.
Special kwezimilo zemfundo isikhungo 1 uhlobo kuthatha izindonga zawo izingane eziyizithulu. Umsebenzi yothisha - ukufundisa ingane abayizithulu ukukhulumisana nabanye, ukuze balukhulume izinhlobo eziningana inkulumo: komlomo, okubhalwa phansi, daktilnoy, Gestural. Kukharikhulamu kuhlanganisa izifundo okuhloswe ngaso kokuzwa isinxephezelo ngokusebenzisa imishini yokukhulisa umsindo-zwi, pronunciation ukulungiswa, ukuma zenhlalakahle kanye umthengi kanye nabanye.
Lo msebenzi kwenziwa futhi esikoleni kwezimilo 2 zilwane, kodwa kuphela oluvuna nabangezwa kahle noma pozdnoglohshih izingane. It ihlose ukubuyisela isithulu ikhono, inhlangano inkulumo umkhuba asebenzayo, ukuqeqeshwa emakhonweni.
Imihlobo sokuqala nesesibili izikole ukulungiswa inqubo yemfundo wenziwa ngezigaba ezintathu imfundo jikelele. Nokho, abafundi abayizithulu badinga isikhathi esithe xaxa iminyaka emibili ukuze balukhulume kahle uhlelo ezisafunda amabanga aphansi.
Imihlobo yesithathu neyesine izikole kwezimilo eyenzelwe izingane ongaboni. Othisha ezikoleni ezikhethekile ngeke ukuhlela inqubo ukuqeqeshwa nokufundiswa kanjalo ugcine omunye analyzers, ukuthuthukisa amakhono korrekionno-compensatory, ukunikeza lithathelwe kwezenhlalo kwezingane emphakathini.
Esikhathini esikoleni kwezimilo 3 izinhlobo ethunyelwe izingane izimpumputhe nezingane nge acuity ezibukwayo kusuka 0.04 kuya 0.08 zinokukhubazeka eziyinkimbinkimbi, okuholela ebumpumputheni. Lesi sikole amukela izingane 4 zinhlobo nge acuity ezibukwayo kusuka 0.05 kuya 0.4 benethuba ukulungiswa. I ngokucacile yokuphambana kuhilela ukuqeqeshwa usebenzisa tiflooborudovaniya futhi ekhethekile izinto didactic ukuncela ulwazi engenayo.
Special kwezimilo esikhungweni uhlobo 5 yenzelwe izingane nge jikelele inkulumo nokungathuthuki, kanye ezinzima inkulumo egunjini lokuhlolwa kwezifo. Inhloso ngqangi yalo esikoleni - ukulungiswa inkulumo isici. Inqubo yemfundo lonke okuhlelwe ngendlela yokuthi izingane nethuba ukuthuthukisa amakhono olimi usuku lonke. Uma uxazulula isici enkulumweni, abazali banelungelo ingadlulisela ingane esikoleni esivamile.
Izingane nge kahle uhlelo zemisipha bangaqeqeshwa esikoleni esikhethekile 6 zilwane. I sokuqondisa izigwegwe Kwenziwa ukubuyiselwa motor imisebenzi, ukuthuthukiswa yabo, ukulungiswa sesimweni yesibili. Ngokukhethekile ikhokhelwa ukuze lithathelwe social nomshikashika ka abafundi.
KweziMilo School 7 zinhlobo uthatha izingane retardation engqondo, futhi amathuba ekukhuleni. Lesi sikole eyenziwa yokulungiswa kwengqondo, ukuthuthukiswa umsebenzi engqondweni yethu bese ukuthuthukiswa imisebenzi ekuqeqesheleni amakhoni. Ngokusho imiphumela aphansi esikoleni abafundi angadluliselwa isikole.
School kweziMilo 8 yefomu kuyadingeka sezingane ezikhubazekile bokusungula ukuqeqesha ngaphansi isimiso esikhethekile. Injongo yokuqeqeshwa - nokuvuselelwa zenhlalo nezengqondo kanye nokwenzeka ukuhlanganiswa wengane ku umphakathi. Kulezi izikole zikhona amakilasi e-ukujula ukuqeqeshwa zomsebenzi.
Cishe zonke lezi zinhlobo izikole kwezimilo ukufundisa izingane iminyaka eyishumi nambili, zinabantu Uchwepheshe pathologists, inkulumo abelaphi, odokotela bengqondo.
Yiqiniso, izingane, wafunda iminyaka eminingi isikhungo, banezimiso nobunzima kule orientation nomphakathi. A indima enkulu ukuhlanganiswa kwezingane abanezidingo ezikhethekile ku umphakathi fanele hhayi kuphela ezikoleni zokuqondisa izigwegwe kodwa futhi abazali. Umkhaya elwa ingane yakho, qiniseka ukuthi bakwazi ukubasiza ukuzivumelanisa nezwe elibazungezile.
Indlela yokuthola phezulu parabola ulakhe
Indlela yokuthola indawo ephindwe cube?
Alternately dvuhshazhny ukuhambisa. Isisetshenziswa enye dvuhshazhnogo Yiqiniso ski
Umlando Omfushane Pythagoras - isazi sefilosofi esingumGreki